Col.aweys oo raba inuu sheegto guusha kaligiis si loogu aqoonsado hogaamiye weyn – Buy Tramadol – Best Prices On Tramadol !!!
Col. Aweys oo ku sagan magaalada Asmara ee dalka Erateriya ayaa ka hadlay hadalkii uu jeediyay Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Etto. Males Zenawi oo sheegayey in ciidamadiisa uu kala baxaya dalka Soomaaliya sababo uu ku sheegay culeys dhaqaale oo soo fuulay dalkiisa.
Balse Col. Xasan Daahir ayaa hadalkaasi ku tilmaamay in uu yahay mid ka dhashay weerarada xoogan ee ay kooxaha ka soo horjeeda u geysanayaan. waada sida hadalka u dhigay isagoo muujinaya inuu yahay ninka ka dambeeya in Ethopia qirato inay baxayso madaama dagaal ba’an looga soo horjeedo joogitaankooda Soomaaliya.
“Hadalka Itoobiya waxaa ka keenay Muqaawamada oo u diiday ciidamadeeda iney nastaan” ayuu yiri Sh. Xasan Daahir Aweys oo taageerayaashiisa ee u hogaamiye Indho Cade ugu baaqay inay dagaalka sii wadaan.
“Dhiigga shacabka ayaa lagu waraabiyaa Gobonimada” ayuu yiri Sheekh Xasan oo shacabka taageera u sheegay in guusha ay soo dhow dahay isla markaana ay horay u sii wadi doonaan dagaalada ay kaga soo horjeedaan ciidamada Itoobiya ilaa ay dalka ka baxaan.
Sh. Xasan ayaa ku tilmaamay Xubnaha Isbaheysiga dib u xoreynta ee jooga Jabuuti ee uu hoggaamiyo Sh. Shariif Sh. Axmed iney yihiin kuwo isdhiibay oo isu dhiibay Itoobiya iyo Dowladda KMG.
“Anaga kama leexan Mabaa’diideena, welina waan ku taaganahay, kuwa ka leexda ee isu dhiibay Caddowga ayaa maanta ku sugan calool xumo” ayuuna sii raaciyay Xasan Daahir oo u muuqday iney ka go’an tahay wax aan dagaal aheyn in guul lagu gaari karo.
Col. Aweys ayaa iska dhigaya hogaamiye diimeed awood ku leh Soomaaliya halka uu isku dayaayo inuu xaqiro ama u gafo hogaamiyaha sharciga ahna gudoomiyaha Isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya oo haysta kalsoonida inta badan umada Soomaaliyeed hadii ay ahaan lahaayeen kuwa dalka jooga ama dibadahaba.
Col Aweys ayaa raba inuu inkaro inuu yahay nin ay ku adeegtaan dowlada Eritareeya oo doonaysa in ciidamada Ethopia ku sii jiraan, nin si weyn u yaqaan Col.Aweys ayaa ku tilmaamay hogaamiye kooxeed shaar diimeed huwan rabana inuu dadka wax magaratada ku qaldo.
Hadaa eegto muqaawamada gudaha waxay si toos u taageereen shirkii Sanca, marka isagana shirkii Sanca wuu khilaafay, ciidamada u baaqayo meesha ay joogaan iyo awooda ay u leeyihiin inay Ethopia la diriraan ayaanba la ogeyn waxaana haboon in loo sheego Col.Aweys in uusan isku qaranin boor iyo shaar diin ee u cadeeyo inuu raba ama u buko inuu kursiga ku fariisto lana yiraahdo madaxwayne.
Nin oday ah ayaa maalin dhaweyd yiri war ninkaan Col Aweys ah muu waaniyo oo eedeeyo wiilasha adeerka u yahay afhayeenada u ah Gabre iyo Col.Yeey marka uu eedaynaayo Shiikh Shariif.
Marka waxaa haboon in uu waaniyo ama eedeeyo kuwa qaraabadiisa ah ee meel walba la taagan inay darajo helaan sida kuwaan oo kale
Afhayeenka Col.Yeey waa Cabdi Xaaji Goobdoon
Afhayeenka Nur Cade iyo Gabre waa AXmed Cabdi Salaan
Oday Sareer, DR Culusow, Gen. Galaal, Daylaafe oo dhamaantood Meles Zenawi ugu tagay Addis Ababa si xukun u helaan balse laga soo baacsaday kuwaas oo hada Casmara xiriir kula leh COL.Aweys
Indho Cade iyo Col.Aweys waa mucaarad doonaya inay soo celiyaan haysashadii Marka iyo Qoryoolay, ninka heshiiska saxiixayna waa wiil ay adeer u yihiin C/raxmaan Cabdi Shakuur marka ma haboonoo inay dhan isku racaan inta ay rabaan inay dad kale oo wadanimo iyo Soomaalinimo go.aanadooda u cabira sida Gudoomiyaha Isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya mudane Shiikh Shariif.
Ummadda Soomaaliyeed waxaa muhiim u ah inaan u iftimino kuwa shaararka badan xiran ee raadinaayo danaha guracan ee qabiilka madax marey.
Previous Previous post: Quality free gallery gay naked man and bad fkk
Next Next post: Xisbiga kulmiye oo burbur kudhow iyo wasiiro iscasiley oo ku wajahan muqdisho.